समाचार अपडेट मारामार गर्नेहरू अचम्मैसग मौन काठमाडौं । पा�चबुदे सहमतिको भोलिपल्टै सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने छलफल गर्न आयोजित नेपाली कांग्रेसको बैठकमा केही अनौठा दृश्य देखिए । सधै�जसो सरकारमा �म जान्छु� भनेर मारामार गर्ने कांग्रेस नेता यसपालि भने मैले जान पाउनुपर्छ भनेर कोही अघि सरेनन् । कांग्रेसी नेताहरू त्यागी भएकाले यस्तो भलाद्मी देखिएका होइनन्, आखिर कांग्रेसीजन मन्त्री बन्न अनिच्छुक हुनुको खास कारणचाहि� अर्कै थियो ।
कांग्रेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावित टोलीनेतामा कृष्णप्रसाद सिटौलाका अतिरिक्त प्रकाशमानसिंह र डा. रामशरण महतको पनि चर्चा चलेको थियो । सुजाताले पनि सरकारमा जाने माग अवश्यै गर्लिन् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, प्रकाशमानले सुरुमै भनिहाले, �म यो सरकारमा जान्न, जेठमा बन्ने अर्काे सरकारमा चाहि� जान्छु ।� महतको पनि भित्री इच्छा त्यस्तै देखिएपछि सिटौलाका लागि बाटो त खुल्यो तर उनले प्रश्न तेस्र्याए� �अहिलेको सरकारमा गएपछि जेठमा बन्ने अर्काे मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने ?� सिटौलाको यस्तो प्रश्न सुनेपछि सुजाता कोइरालाले सातो लिइन् । �तिमीले मात्रै खानुपर्ने ? अरूलाई पालो दिनुपर्दैन ?� सुजाताले झा�टेपछि उनी निकैबेर शिर झुकाएर लज्जित अनुहारमा बसे । अन्ततः नखाऊ� भने दिनभरिको सिकार, खाऊ� भने कान्छा बाबुको अनुहार भनेजस्तै अवस्थामा कृष्णप्रसाद सिटौला र सूर्यकिरण गुरुङका भागमा ३ हप्ते मन्त्री पद पर्न गयो ।
छोटो अवधिको सरकारमा जान इच्छुक नदेखिएकी सुजाताले पनि चुनावी सरकारमा उपप्रधानमन्त्री दाबी गर्नु स्वाभाविक छ । चुनावी सरकार लामो र आकर्षक भएकाले उपसभापति गोपालमान, महामन्त्री प्रकाशमान, सबैले यसमा रहर गरेका छन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा जाने कि रामचन्द्र पौडेल भन्ने विवाद पनि कांग्रेसमा अवश्यै बढ्नेछ । सुजाताले त अहिल्यै भनिसकेकी छन्� भावी प्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलजी नै बन्नुहुन्छ । उता पौडेल र देउवाबीच विवाद नमिले सुशील कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने माग गर्ने कांग्रेस नेता पनि छन् । कतिपयले अब कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने चुनावी सरकारमा सिटौलाको बाटो थुन्न यसपालि उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको अनुमान लगाएका छन् । तीनहप्ते सरकारमा जाने नेतालाई अर्काे मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्ने या नगर्नेबारे कांग्रेसमा विवाद बढ्ने संकेत देखिएको छ । र, यो कुरा पनि निश्चित छ कि यसपटकको बैठकमा सरकारमा जाने विषयमा झगडा नगरी साधुजस्ता देखिएका कांग्रेस नेताहरूले जेठ १४ आसपास बन्ने एकवर्षे सरकारमा जान ग�गटालेजस्तै एक�अर्काको खुट्टा गतिलैसित तानातान गर्न सक्छन् । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम